Khabar Nirantar | » रिक्त सवैधानिक आयोगहरु : राजनीतिक सहमति खोज्ने कि सक्षम? रिक्त सवैधानिक आयोगहरु : राजनीतिक सहमति खोज्ने कि सक्षम? – Khabar Nirantar
प्रधानमन्त्री मुख्य जिम्मेवार- बलराम केसी
संवैधानिक निकाय रिक्त रहेको जिम्मेवारी र दोष अरुलाई होइन, प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ। मन्त्रिपरिषद् वा प्रतिपक्षलाई देखाएर उम्कन मिल्दैन। संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्री नै हुन्छन्। त्यसलै उनी नै मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। हरेक नियुक्ति प्रधानमन्त्री भएर आउनुपर्छ। राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मामा उनै भएकाले उहाँ अक्षम हुदाँ नियुक्त हुन सकेन। आयोगमा नियुक्त मात्र होइन, सक्षम र विवादरहित नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो।
स्रोत र साधनको समस्या छ। पदाधिकारी छैन। कर्मचारी छैन। बजेट छैन। आयोगहरु संविधानमा मात्र भयो। आयोगहरुलाई बजेट व्यवस्था छैन। यति धेरै आयोग भए, उनीहरुको भूमिका धेरै संविधानमा छ। तर आयोगका कर्मचारीको सरुवा बढुवाकै लागि विशेष व्यवस्था चाहिएको छ। सरकारका कर्मचारी अख्तियार र निर्वाचनमा असर पर्ने देखिएको छ। स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने मानिस चाहिएको छ। nepallive